🥇 ▷ Hackers waxay ka faa iideystaan ​​daciifnimada taleefannada casriga ah si ay ula socdaan meesha isticmaalaha ✅
Hackers waxay ka faa iideystaan ​​daciifnimada taleefannada casriga ah si ay ula socdaan meesha isticmaalaha
Afduubeyaashu waa aamusnaan dhibanayaashu ma arkaan wax farriin SMS ah gudaha santuuqdooda ama meelaha ay ku sugan yihiin, markaa waxba kama shakiyi karaan.
Hackers waxay u adeegsadaan daciifnimo inta badan “taleefanka” casriga ah “si ay ula socdaan meesha isticmaalayaashu ka shaqeeyaan ayna ka faa’ideystaan ​​falalka kale ee musiibada ah, koox cilmi baarayaal ah oo amaanka amaanka ka faa iideysata ayaa ka digtay warbixin.
Sida laga soo xigtay cilmi-baarayaashan, budhcad-badeeddu waxay adeegsadaan hab weerar ku saleysan SMS oo loo adeegsado adduunka dhabta ah bixiyaha ilaalada si ay ula socdaan oo ula socdaan shaqsiyaadka.
Waxaan hubinay in faa iidadan ay soosaartay shirkad gaar ah oo gaar ah oo lashaqeysa dowladaha si ay ula socdaan dadka, “cilmi baarayaashu waxay yiraahdeen.
“Waxaan aaminsanahay in nuglaantan ay ugu yaraan ka faa iideysaneysay ugu yaraan labadii sano ee lasoo dhaafay jilaa hanjabaad aad u sarreeya oo dalal dhowr ah, badiyaa ulajeeddooyin ilaalin ah,” ayay raacisay.
Baarayaasha waxaay sheegeen in weerarkani uu ka dhigan yahay “mid aad u weyn oo kakooban kakanaanta iyo cufnaanta” marka la barbar dhigo weeraradii hore loogu arkay shabakadaha mobilada iyo “kor u kac weyn ee dhanka xirfadaha iyo awooda kuwa weerarka soo qaaday.”
Sida laga soo xigtay cilmi-baarayaashii helay weerarkan, waxa loogu yeero ‘Simjacker’ ayaa ka faa’ideysata aalado fara badan oo mobile ah, iyadoo aan loo eegin qalabka ama barnaamijyada ay adeegsadaan.
Weeraradu waxay ku shaqeeyaan iyaga oo adeegsanaya istiraatiijiyad loogu talagalay in loo isticmaalo keliya taleefannada gacanta si ay ula xiriiraan tooska ah kaararka SIM-ka gudaha taleefannada macaamiisha. Hawl wadeennada waxay u adeegsan karaan interface-ka si ay u bixiyaan adeegyo gaar ah, sida adeegsiga xogta ku kaydsan SIM-ka si ay u bixiyaan dheelitirka koontada.
Afduube wuxuu ku bilaabmaa weeraryahan isticmaala taleefanka gacanta casriga ah, modem GSM ama adeeg kasta oo A2P ah si uu ugu diro farriinta SMS lambar lambarka taleefanka dhibanaha. Farriimahaan SMS waxay wataan hagitaan qarsoon oo loo yaqaan “SIM Toolkit” (STK) tilmaamo la jaan qaada codsigaga ku qoran kaarka SIM halkii uu taleefanka isticmaali lahaa.
Weerarayaasha afduubayaasha ah waxay ku xadgudbeen habkan si loogu qasbo taleefannada dhibbanayaashu inay u gudbiyaan xogta goobta iyo koodhadhka IMEI, kaas oo kaarka SIM-ka uu markii dambe farriin SMS ah ugu diro aaladda dhinac saddexaad, halkaas oo qofka wax weerarayaa ku diiwaan geli goobta dhibbanaha.
Waxa ugu xun ayaa ah in Weeraryahankii Afduubtay uu yahay mid gebi ahaanba aamusan oo dhibbanayaashu ma arkaan wax farriin SMS ah gudaha santuuqdooda ama banaanka, sidaas darteedna kama shakiyi karaan.
Intaa waxaa sii dheer, maxaa yeelay Simjack wuxuu adeegsadaa tikniyoolajiyad ku xeran kaarka SIM-ka, weerarka ayaa waliba shaqeynaya iyada oo aan loo eegin nooca qalabka isticmaalaha. “Waxaan ogaanay in aaladaha ku dhawaad ​​dhammaan soosaarayaasha loogu talagalay in si guul leh loogu soo celiyo meesha: Apple, ZTE, Motorola, Samsung, Google, Huawei iyo xitaa aaladaha IoT oo wata kaararka SIM,” cilmi-baarayaasha ayaa sharraxay.
Warka wanaagsan ee kaliya ayaa ah in weerarka uusan ku saleysanayn farriimaha SMS ee joogtada ah, laakiin lagu soo rogo lambarro adag oo binary ah, oo loo soo diro SMS, taasoo macnaheedu yahay in hawlwadeennada shabakaddu ay awood u yeelan karaan inay habeeyaan qalabkooda si ay u horjoogsadaan macluumaadka noocaas ah ee ka gudbaya shabakadooda oo soo gala. aaladaha macaamiisha.
Soo ogow wixii ugu dambeeyay ee dhaqaalaha dijitaalka ah, bilawga, fintech, hal-abuurka shirkadeed iyo blockchain. HALKAN KA DHAGEYSO